Wasiirka Dastuurka C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa shaaciyay in Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu is casilay, isla markaana mooshinkii ka yaallay la laalay. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Wasiirka Dastuurka C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa shaaciyay in Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu is casilay, isla markaana mooshinkii ka yaallay la laalay.
Allhadaaftimo April 9, 2018 Uncategorized
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku shaaciyay Mr Xoosh oo ka mid ahaa xubnaha ay si aad ah siyaasadda ugu loolameen isaga iyo Jawaari, marka loo eego Barnaamijka Dastuurka.
“Waa Rasmi Guddoomiye Jawaari waa is casilay, Mooshinkii waa la laalay”ayuu yiri Mr Xoosh qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Xildhibaan C/rashiid Dahir Gaboobe ayaa sheegay in in Guddoomiye kuxigeenka 1aad C/wali Muudey oo soo gaaray xarunta Golaha Shacabka uu ku wargelyay inuu Jawaari is casilay, isla markaana maalinta arbacada uu kulanka guud kaga dhawaaqi doono.
Inkastoo aanu Jawaari si rasmi ah ugu dhawaaqin is casilaada, hadana waxaa muuqata in si hoose loo dusiyay wada xaajoodkii ay xalay isaga iyo Madaxweynaha yeesheen, taasoo ka dambeysay inuu ogolaado is casilaada.
Xaalada siyaasadeed ee uu dalka ku jiray ayaa u muuqata mid soo afjarmeysa, waxaana la is weydiinayaa halka ay ku dambeyn doonto kala aragti duwanaanshihii iyo iska soo horjeedak xildhibaanada labada dhinac.
Previous DAAWO: XILDHIBAANADA OO SOO JEEDIYEY IN MADAXWEYNE FARMAAJO IS CASILO
Next Qaar Kamida Xildhibaanada Golaha Shacabka Somalia Oo Ka Hadlay Iscasilaada Jawaari